Filtrer les éléments par date : mardi, 18 janvier 2022
mardi, 18 janvier 2022 20:11
Faceboobaka lasa mofo dipaina, mifintina tsy miova vidy
Mitovy amin'ny mofo koa ry Telma sy Orange zao, tsy miova ny vidiny, fa ny lanjany mifintina hatrany, aiza ka ry facebobaka 500Mo nifintina vaky sasaka 250Mo amin'ny vidiny 500ar ampiasaina 3andro.
Nefa ny an'olona any ivelany ny internet efa tapitra misy gratuit daholo izay toerana rehetra aleha, ny ao an-trano mahazo chaine télé efa 250 mahery miampy Gros débit 1min mahavita mi télécharger film iray, nefa 18euro (77 000ar = 385 000Fmg) dia efa mahazo iray volana, nefa eto amintsika 189 000ar (945 000Fmg) ny mora indrindra amin'ny internet mbola sokatra be.
Tafandria mandry aby, fa vao avy koa ny orana dia mangatsiaka koa ny internet.
Tsy ampy any amin'ny 400 miliara ariary any ny vola niditra tamin'ny hetra tamin'ny teti-bola taon-dasa izay noho ny Covid-19 sy ny fitondongan'ny toe-karena, ka naha kely ny hetra sy vola niditra tamin'ny fanjakana.
Ny vahaolana hitan'ny fitondrana izany dia ny haka izay banga izay amin'ireo orinasa lehibe eto Madagasikara, ka dia mandeha avokoa ny "redressement fiscal" sy ny fomba maro rehetra.
Ny orinasa lehibe iray mpanamboatra zava-pisotro eto an-toerana fotsiny no kasaina akana 15miliara ariary, ny mpivarotra amin'ny tsena lehibe, grande surface, mpivarotra PPN, mpanafatra ciment sy vy ary kojakoja fiara.
Rehefa nisy nanontaniana moa izy ireo, dia nilaza fa tsy hiasa fatiantoka, fa dia izay alain'ny fitondrana tsy ara-drariny aminy dia ampidiriny ho masokarena, ka dia hiditra amin'ny vidin'ny amarotana azy amin'ny mpanjifa.
Ireo tompon'ny orinasa hafa kosa nilaza, fa anakatona ny orinasany rehefa tsy zaka intsony ny antsonjay ataon'ny fitondrana. Fitondrana tokony anampy azy ireo hampiroborobo ny toe-karena sy amorona asa, nefa lasa fitondrana dinta, mitsetsitra ny kely mitsipoizipoizy.
mardi, 18 janvier 2022 09:36
Ty vava e!!
Raha io vavaben'ny mpitondra tenin'ny Governemanta io, tokony nampiany kely hoe, "Tsy izao no ilana ilay teleferika, dia tsisy any anaty rano ny tongotry tenisany".
Oups, voaroaka ianao raha zaho no filoha.
Tsy ho filoha mandrakizay hozy ny mpitaty rakena,
Dia avaliko tsotra hoe, angaha ny anareo ho filoha mandrakizay koa.
Mandeha tour io, fa ny vava no tsy atao be, fa maro izay be vava izay, fa niafara taiza daholo?
Tsindrona lenan'ny orana.
mardi, 18 janvier 2022 09:24
mardi, 18 janvier 2022 09:23
Toetr'andro : Ahiana ny hisiana fiforonana rivodoza amin'ny fiafaran'ny herinandro
mardi, 18 janvier 2022 09:03
Antananarivo sy ny manodidina : Namono olona sy namela takaitra ny ora-nikija
Miakatra ny rano, mihotsaka ny tany, tapaka ny lalana, nianjera ny tamboho sy trano, ary namoizana ain'olona izany, toy ny nitranga teny Bemasoandro... vokatry ny rotsak'orana halina mandra-maraina teto an-drenivohitra.